Waa tee kooxda ka dhisan Ingiriiska ee amaahda ku soo qaadanaysa weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Gareth Bale? – Gool FM
(England) 14 Maajo 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Tottenham ee ka dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa doonaysa inay dib horyaalka Premier League ugu soo celiso Gareth Bale, iyadoo raba inay kula soo wareegaan heshiis amaah ah.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in kooxda Real Madrid ay diyaar u tahay inay Gareth Bale amaah ku siiso Tottenham, haddii ay bixinayso adduun dhan 10 milyan oo gini oo u dhiganta 13 milyan oo dollar.
Spurs ayaan dhankeeda doonayn inay heshiis joogto ah kula soo wareegto xiddiga xulka qaranka Wales, waxaana taa bedelkeeda ay door-bidaysaa inay ku soo qaadato heshiis amaah ah.
Si kastaba ha ahaatee, Bale waxa ay u muuqanaysaa inuu sameyn doono mushaar dhimis wayn si ay Los Blancos ugu ogolaato inuu dhaqaaqo, waxaana haatan amaah ku doonaysa kooxdiisii hore ee Tottenham.
Dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa ku dhow inay 25 milyan oo gini oo u dhiganta 32 milyan oo dollar kula soo wareegto ciyaaryahanka naadiga Fulham ee Ryan Sessegnon sida uu warinayo Wargeyska Daily Mail.
Kooxda Arsenal oo mushaarka u kordinaysa Matteo Guendouzi... (Imise lacag ah ayuu qaadan doonaa Isbuucii?)